Dhirta iyo xayawaanka Griiga, miyaadan wali aqoon iyaga? Galaya! | Safarka Absolut
Dhirta iyo xayawaanka Giriigga
Monica Sanchez | | Greece
La dabeecadda aad ka heli karto Griiga waa mid cajaa'ib leh, waana sida ay sheegtay hay'adda aan dawliga ahayn ee WWF, dhulka ayaa loo qaybiyay laba qaybood oo waaweyn, mid kasta oo leh astaamo gaar ah oo ka dhigaya mid gaar ah.
Si aad ugu raaxeysato dalka, waxaan kuu sheegayaa adiga dhirta ugu badan ee wakiil iyo xayawaanka Giriigga. Ha moogaan
Sidaan soo sheegnay, dhulka waxaa loo qaybiyaa laba nooc oo waaweyn, kuwaas oo kala ah:
1 Kaymaha adag ee adag
2 Kaymaha Mediterranean
Kaymaha adag ee adag
Markiisa waxaa loo qaybiyaa kaynta balkan ee buuraha woqooyi Iyo in kaynta isku dhafan ee buuraha rhodope. Cimilada goobahan waa mid dhexdhexaad ah, taas oo macnaheedu yahay in heer kulku uu ahaado mid fudud sanadka oo dhan, xilliga qaboobahana waxaa jira dhaxanno qaarkood.
Dhirta iyo dhirta Giriigga iyo duudda kaymahan waxay la qabsadeen inay ku noolaadaan xaalado gaar ah, iyadoo habka koritaanka uu inta badan gaabis yahay, gaar ahaan kan dhirta. Laakiin aan eegno si faahfaahsan:
Ka mid ah dhirta ugu caansan ee ka mid ah keymaha kuleylka ah ee Griiga waxaan ku muujineynaa geedaha sharafta leh sida:
Fir fircoon (Abies alba): Waa conifer tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah leh ah u gaaraya 60m
Carpe bariga (Carpinus orientalis): Waa geed xaaluf ah oo gaara dhererkiisu yahay 10 mitir. Waxaa laga heli karaa garabka, maxaa yeelay labaduba waxay u baahan yihiin cimilo qabow oo yar si ay u koraan.
Hilibka cad (Carpinus betulus): Waa geed caan ku ah geedaha xaalufin badan, oo ka koreeya 600 mitir oo ka sarreeya heerka badda. Waxay gaareysaa dherer ah 25 mitir, ugu badnaan 30m, mararka qaarna waxaa laga heli karaa inay ka soo baxaan geedo beech ah.
Beech (Fagus sylvatica): Waa geed gaabis ah oo xaalufinaaya dhirirkiisuna gaarayo 40 mitir. Griiga waxaa laga helaa sameynta keymo kuyaal Pilio.
Trojan oak (Quercus trojana): Waa geed gaabis ah oo xaalufinaaya oo dhererkiisu yahay ilaa 20 mitir.
Keymahaas waxaa ku nool Bears Brown, xamaarato badan sida qorraxda, qorraxda, abeesooyinka viperine o Vipipus sanka, iyo a riyo buur cad aad dhif u ah waxaad ka heli doontaa oo keliya Griiga, gaar ahaan gobta Samaariya.
Noocan kaynta waxaa loo qaybiyaa afar nooc: Keydka dhireedka ee Illyrian, kaymaha isku dhafan ee Buuraha Pindo, Kaymaha Mediterranean ee Crete iyo sclerophyllous iyo kaymaha isku dhafan ee Aegean iyo galbeedka Turkiga.
Dhirta iyo xayawaanka aad arki karto waxay yaqaanaan sida loogu noolaado meel uusan roobku had iyo jeer ka da’in wax badan, oo heer kulku aad u kici karo inta lagu jiro xagaaga. Marka, noocyadeeda ugu wakiilka ah waa:
Ka mid ah dhirta ugu badan ee wakiillada ah ee kaymaha Mediterranean, waxaan iftiimineynaa dhirtaan waxtar u leh aadanaha:
Yicibta (Prunus dulcis): Kani waa geed xaalufin ah oo dhererkiisu gaarayo 7m wuxuuna soo saaraa lowska macaan: yicibta.
Taariikh (Phoenix dactylifera): Waa geed timireed si dhakhso ah u koraya oo gaari kara dhererkiisu yahay 10 mitir. Waxaa lagu beeray guud ahaan gobolka Mediterranean-ka caabbinta abaarta iyo taariikheed.
Geedka berdaha (Ficus carica): Waa geed xaalufin ah oo gaara dherer dhan 6m oo leh koritaan deg deg ah oo midhihiisa, berde, sidoo kale la cuni karo.
Rummaanka (Punica granatum): Waa geed geedo aad u qurux badan leh oo sidoo kale soo saara miraha qaar, rummaanka, kuwaas oo ay cuni karaan aadanaha. Wuxuu si dhakhso leh ugu koraa ilaa 5-6m.
Geed saytuun ah (Olea europaea): Waa geed weligiis cagaar ah oo gaara 5-6 mitir, soona saara tiro badan oo saytuun ah.
In kasta oo aan la iloobin ubaxyada midabka siiya muuqaalka, sida anemonesah tulips, las violets ama daffodils.
Cimilo ku adkaan karta nolosha xoolaha, waxaa xiiso leh in la muujiyo noocyada kala duwan ee xayawaanka ee aad ka heli karto keymahaas, sida lynxes, las dabaqado bunni ah, dawacooyin, dawaco, deerada, yurub.
Nolosha badda ... iyo cirka
Marka laga hadlayo badda, haddaad quusto waxaad arki doontaa mullet, aargoosatada, squid, octopuses, haar, dillaac, muuska, ciro iyo xataa xalaasha.
Haddii aan ka hadalno shimbiraha, Giriiggu wuxuu ku faani karaa inuu yahay bar kulan ama barta marin u ah qaar badan oo ka mid ah, markaa haddii aad rabto inaad aragto -ama isku day ugu yaraan 🙂 - gaajo, Habeenki, Ducks, shimbiraha qulqulaya, pheasants, caloosha o hawraar, ha ka waaban inaad u safarto dalkan hodanka ku ah nolosha xoolaha iyo dhirta.
Muuqaalka dhulkeeda waxaa ku yaal xayawaan iyo xoolo badan oo dhir ah, oo ay jiraan qaar 5500 nooc oo dhir ah, Naasley 116, Shimbir 422, 126 kalluun, 60 xamaarato y 20 ambiibiyiin. Cajiib, sax?
Marka hadda waad ogtahay, haddii aad jeceshahay dalxiiska deegaanka oo aad rabto inaad ilaaliso dhammaan noocyada flora iyo fauna ee caadiga u ah gees kasta oo ka mid ah dhulka Giriigga, ha ka waaban inaad jarto tigidh inaad ku qaadato fasax lama iloobaan ah. Kama qoomameyn doontid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dhirta iyo xayawaanka Giriigga
Ubaxani aad ayuu dhif u yahay laakiin wuu ka sii weynaan lahaa haddii aan magiciisa waligiis laga maqal Mexico
waxayna noqon laheyd geed aan la aqoon
Waxaan u maleynayaa inay ku fiicnaan lahaayeen inay ka saaraan gelitaankan boggooda, sababtoo ah lafteeda waxay ka qaadaysaa dhammaan sumcadda wixii qofku u sii wadi karo akhriskiisa.
Ku jawaab B.
Ku jawaab hala
wax kasta oo ay qorayaan waa wax aan jirin
laakiin qaarna ma yeelaan
fiiri maxaa yeelay qofna ma doonayo inuu noqdo saaxiibkey ama saaxiibkey qof walba wuu i neceb yahay maxaa yeelay
Ku jawaab Nazly
Waxay i weydiiyeen su'aal wax fikrad ahna kama haysto ee ma i caawin kartaa? su’aashu waxay tahay:
Waa maxay dhirtii hore iyo / ama hadda iyo / ama xayawaanka soo jiitay dareenkaaga?
Ku jawaab nacnac
Hfjfkjfwsieuosjsjskidiojdkdlsjjebwj! Jskv ** # ¶ £ ^ * ^^^ & ¥ jGFjB'r * yYV4tYH√6ππ ^ • € ¥ & n = & ¶_¶ × = ×: ÷ _ ÷ √_√: |]
Ku jawaab thshsbsn
Ku jawaab Mateo
Haye, magaceygu ​​waa Patrick
Haye, magaceygu ​​waa Patrick oo magacaa magacyadaadu?
kuwa ixtiraam darada leh midkoodna uma qalmo inuu galo boggan maxaa yeelay macluumaadka la bixiyay waa mid waxtar leh mana aqbalaan xaqiiqda
Waa maxay mawjadaha xun ee dhammaantood leh
Meelaha qarsoodiga ah ee Amsterdam ... cidina ma oga